eHimalaya Online || News from nepal » वलिवूड टिभीको यी जोडि करण-तेजस्वीले खोले बेडरुमको सिक्रेट, कसले राम्रो गर्छ त यो काम ?
२०७९ असार ६ गते सोमबार ०३:५५
अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश र करण कुन्द्राको जोडी चर्चित स्टार जोडी बनेको छ । आगामी दिनहरूमा, यस जोडीका सबै PDA र उत्कृष्ट तस्विर र भिडियोहरू सोशल मिडियामा आउँदैछन्, जुन मिनेटमा भाइरल हुन्छन्। करण र तेजस्वी सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि...
अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश र करण कुन्द्राको जोडी चर्चित स्टार जोडी बनेको छ । आगामी दिनहरूमा, यस जोडीका सबै PDA र उत्कृष्ट तस्विर र भिडियोहरू सोशल मिडियामा आउँदैछन्, जुन मिनेटमा भाइरल हुन्छन्। करण र तेजस्वी सार्वजनिक स्थानहरूमा पनि रोमान्स गर्न पछि हट्दैनन्, तर जोडीले एक पटक आफ्नो बेडरूमको रहस्य पनि खुलासा गरेका थिए।
वास्तवमा रियालिटी शोमा कंगना रनौतले करण र तेजस्वीलाई सोधेकी थिइन् कि उनीहरुमध्ये सबैभन्दा राम्रो किससर को हो ? यो जोडीले एकदमै खुलेर जवाफ दिएका थिए । कंगनाको यो प्रश्नको जवाफ दिँदै करण कुन्द्राले तेजस्वीको नाम लिए र उनलाई राम्रो किसर भने । यसपछि तेजस्वी निकै लजालु देखिइन् । यो घटना कंगना रनौत द्वारा होस्ट गरिएको OTT रियालिटी शो ‘लक अप’ को हो। जब करण र तेजस्वी शोमा सँगै देखा परेका थिए ।
वर्कफ्रन्टको कुरा गर्ने हो भने, आजकाल तेजस्वी शो ‘नागिन ६’ मा देखिएकी छिन् । यससँगै उनी अभिनेता आयुष्मान खुरानासँग पनि बलिउडमा डेब्यु गर्दैछिन् । तेजस्वीलाई फिल्म ‘ड्रिम गर्ल २’ मा आयुष्मानसँग स्क्रिन सेयर गरेको देख्न सकिन्छ ।
प्रकाशित मिति २०७९ असार ६ गते सोमबार ०३:५५